Leticia Sierra. Kubvunzana nemunyori we Mhuka | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Nhema nhema
Mufananidzo: neruremekedzo rwaLeticia Sierra.
Leticia Sierra Iye ndiAsturian uye anouya achibva munyika ye utapi venhau, asi akapa iyo svetukira kumabhuku neruzivo na nhema nhema izvo zviri kuita kuti vanhu vataure. Zviri mhuka. Muizvi indavhiyu Anotitaurira nezvazvo uye nedzimwe nyaya dzakawanda. Ndinotenda zvikuru mutsa wako nenguva yakatsaurwa.
Leticia Sierra - Bvunzurudzo
LETICIA SIERRA: Iwo enganonyorwa dzekutanga dzandakaverenga dzaive dzechidiki: mafaro e Esther y Vashanu. Yekutanga "mukuru" inoverengeka ini handicharangarira chaizvo kuti chaive chii, asi ini ndinofungidzira chingave chimwe zita re Agatha Christie kana of Victoria Holt.
Nyaya yekutanga yandakanyora raive nemakore matanhatu kana manomwe uye raive nyaya, nemadhirowa uye kuti ini pachangu ndakasonera neshinda kuti iite kunge yandaona muzvitoro zvemabhuku.
AL: Nderipi bhuku iro rakakukanganisa uye nei?
SL: Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa, naGabriel García Márquez nekuti ndiye anonyanya kutaurwa muparadzi munhoroondo. Ndakazviwana zvakanaka, zvichityisa, zvine hutsinye.
AL: Uye munyori iyeye waanofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
LS: Gabrieri Garcia Marquez, Isabel Allende, Lawrence Silva, Anne Perry, PD James, Agatha Christie, Maria Higgins Clark, Dolores Redondo, Tambanudza Läckberg... Uye ini ndaizoenderera nekuverenga.
AL: Chii chatinowana munharaunda yako, mhuka?
SL: mhuka inoverengeka yematsotsi mandinoita kuratidza pane kwatinogumira mutsika. Kuti muverengi anoshamisika kuti achakwanisa kusvika papi mune mamwe mamiriro kana mamiriro, kana akazodarika mutsetse wakanaka uyu unoparadzanisa munhu nemhuka, kubva kuchikara.
Isu tinokwanisa kuuraya here? Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, ndinogutsikana kuti hongu, isu tese tinokwanisa kuyambuka iyo tambo yandinotaura nezvayo, mutsetse uyo unoparadzanisa munhu nemhuka. Uye padiki padiki, pazuva nezuva-zuva, zvakajairika kupfuura zvatinofunga kuti tinorega mhino yemhuka yedu ichioneka. Zviri nyore kwatiri kuti titendeuke kana kutuka pane kuita mangwanani akanaka, ndapota kana kukutendai. Isu tinorarama munharaunda umo zviri nyore kuve akaipa pane kunaka. uye, chii chakanyanya, dzimwe nguva chinoonekwa zviri nani uye chakatomisikidzwa. Izvo zvinotishamisa isu zvishoma nezvishoma uye ndiko kuti, kutaura zvishoma, kunetseka, kana zvisina ngozi.
Iyotichinzwa kuti tiri panjodzi huru uye tinowanzoitirwa mhirizhonga, kungave kwekutaura kana kwepanyama ndeimwe yemasanhu eruzivo. Uye ini ndingafarire kuisa icho chiratidzo mupfungwa dzemuverengi kuitira kuti, pakupera kwebhuku, azvizive ega achinzwira tsitsi nemaitiro angu.
Uye izvi, mu mhuka iyo kuferefetwa kwemhosva inotyisa mutaundi diki uye rakanyarara muAsturias, asi tsvakurudzo yakavapo nenzira mbiri: mapurisa nevatori venhau. Mupurisa, achitarisa muongorori kubva kuboka reHomicide reMapurisa eNyika, uye mutori wenhau, achitarisa mutapi venhau. Yekutanga, mutsetse wakaomarara wekuferefeta uye unorambidzwa zvikuru nemapurisa nemaitiro ekutonga. Yechipiri, isingachinji inoshanduka uye ine nzira shoma kupfuura mapurisa, asi iyo zvakare inowana mhedzisiro uye zviyeuchidzo nezve iyo kesi. Zvese mitsara ivo vari kupa zvingaratidza muverengi wezvakaitika, kuti zvakaitika sei, sei zvakaitika uye ndiani aive ruoko rwekuuraya.
AL: Ndeupi munhu wezvekunyora waungadai uchida kusangana nekusika?
LS: A Hercule Poirot. Anoratidzika kwandiri kunge aesthetically anotyisa hunhu, wepfungwa anonakidza kwazvo uye haana nguva zvachose.
AL: Chero yakasarudzika tsika kana maitiro kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
SL: Kunyora ndinoda ambient ruzha: terevhizheni yakavhurika, vanhu vachitaura uye kana iri kupopotedzana zvirinani, ruzha, ruzha. Kunyarara kunondidzikisira zvakanyanya uye kusurukirwa futi. Ndinoda kucherechedza vanhu varipo. Ndokusaka zvakandiomera chaizvo kuti ndipinde muhofisi kuti ndinyore. Ndinoda kunyora mukirasi, nemurume wangu nemwanasikana pedyo neni uye, kana zvichibvira, tichitaura. Muchokwadi, ini ndakanyora chikamu cheino novel mune yekudyira ini pandanga ndakamirira kuti mwanasikana wangu abude mukirasi yake yeChirungu.
Pane kudaro, kuti ndiverenge ndinofanira kunyarara. Ini handikwanise kumira kuverenga nemimhanzi kumashure kana TV iriko. Saka nguva yangu yekuverenga kuverenga husiku uye pamubhedha. Ndiri munhu asinganzwisisike.
SL: Ndinonyora chero nguva. Zvino zvandava kumba, chero nguva. Kazhinji mangwanani. Paaishanda, paaidzoka kumba achibva kubasa uye kwaive kubva naXNUMX dzemanheru kusvika gumi kana gumi nerimwe pausiku. Mazuva ese. Uye sezvandakambokuudza kare, nzvimbo yangu yandinofarira imba yekutandarira.
Ini ndinochengetera kuverenga kwehusiku, yakatwasuka kana zvakafanana, mumubhedha uye mukunyarara kwakazara.
AL: Mamwe mabhuku emhando?
SL: Changu chandakamirira inyaya yenhetembo. Handikwanise kuzvinzwisisa uye pane nhetembo diki diki dzandinofarira, asi nekuda kwekusaziva kwangu.
Ndinozvifarira yemitambo, kunyanya iyo ye Alexander Casona. Uye iyo nhoroondo yenhau inobatawo pfungwa dzangu. Uye zvakare, iri mhando iyo yaanogona kunge asina kutendeka kune iyo genre yemapurisa.
LS: Ndiri kuverenga munyori weAsturian: Alicia G. Garcia uye nhoroondo yake yekupara mhosva Jeri. Kutsoropodza kukuru kwekutsoropodza uye kunyepa kwemamwe mapurogiramu eterevhizheni uye kuti tinovengwa sei isu kana vatariri. Yakakurudzirwa.
SL: Ndiri mutsva kunyika yekutsikisa. Ndiyo nganonyorwa yangu yekutanga, saka handinyatso kuziva chekukuudza. Asi ini ndinotya kuti zvimwe zvakanyorwa, zvakawanda kupfuura zvinoverengwa, kuitira kuti munyori agare achizotadza. Hongu Ndinoudza vese vanyori vari kuedza kuti vaburitse kuti havaregi kuyedza, kuti varege kukanda tauro, kuti varambe vachitumira zvinyorwa, kuti vave kutsungirira, kugara, kusimbirira uye kuti vanotenda zvakawanda mukati mavo uye nebasa ravo. Haungazive.
AL: Ndeipi nguva yedambudziko ratiri kusangana nekukutora iwe? Iwe unogona here kuchengeta chimwe chinhu chakanakira kana chinobatsira kune enguva yemberi zvinyorwa?
LS: Panguva iyoyo, iwe waifungidzira kuti kuvhurwa kweruzivo, kwakarongerwa Chivabvu 2020, kwaifanira kuzoendeswa kuna Ndira 2021. Uye ikozvino kusangana nemuverengi hakuna, nekuti mharidzo idzi pamusoro mutsetse, haugone kuronga misangano kana masaini-kumeso-masiginecha.
Ini ndinofunga uyu mamiriro wedenda inotisiya tisina tariro. Kune akawanda akafa, akawandisa mhuri dzakaparadzaniswa kwegore uye yakawandisa isina huchenjeri clowning kunyangwe zvese kuti uwane kuverenga kwakanaka. Kuva zvishoma zvisina basa Ini ndinofunga kuti iyi mamiriro umo musina sarudzo asi kushandisa nguva yakawanda pamba inoverengwa zvakanyanya uye vamwe vakaona kuti kuverenga kunonakidza. Uye izvo zvakanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Leticia Sierra. Kubvunzana nemunyori weMhuka